KA HELI KARTAA?
S: Aaway alaabtayda ka soo dejinayaan?
Alaab kasta sida kabaha, boorsooyinka, waxaa laga dhoofiyaa Aasiya. In kasta oo alaabadayadu ka imanayaan Aasiya, tayadoodu aad bay u fiican tahay, wakhtiyadeenna maraakiibta waa tartan mana qiimeeyaan sicirkeena.
Alaabooyinka kale oo dhan sida dharka daabacan sida (funaanadaha, dhididka, hoodhadhka, kiisaska taleefanka, iwm.) Ayaa si toos ah looga soo dejiyaa alaab-qeybiyeyaasheeda United States.
Waxyaabahayaga la daabacay ayaa la raray Feejignaanta EMS!
S: Waa maxay Wakhtiyada Saacadda Gaarsiinta Qiyaasta amarradayda?
Waxyaabaha ugu Waa Weyn (T-shirts, Sweatshirts, Hoodies, jaakadaha, koofiyadaha, Maaskaro Maska, Boorsooyinka dhabarka, Xirmooyinka, Jijimooyinka, Giraan, Kiisaska Taleefoonka)
Waqtiga Soo-Saarka: 2-4 Maalmood
US, UK, CA, AUS Waqtiga Gaarsiinta AUS Qiyaasta: 12-25 Maalmood (EMS Iyada oo la raacayo Raadinta Goobta)
US, UK, CA, AUS amarada wax soo saarka ee ugu weyn ee aan imaanin muddo 60 maalmood gudahooda ee nidaamka bixinta ayaa u qalma dib u soo celinta ama ku xirnaan lacag la’aan ah.
Qiyaasta Waqtiga Gaarsiinta Caalamiga: 2-4 Toddobaadyo (Kuma Jirto Raadinta Ugu Dambeyn ee Socdaalka)
Amarada caalamiga ah ee aan ku soo gaarin 60 maalmood gudahood marka laga baaraandego dalabka waxay xaq u leeyihiin lacag celin ama dib-u-dirid bilaash ah.
Qiyaasta Waqtiga Gaarsiinta: 10-14 maalmood (DHL oo lala socdo Raadinta)
Wixii amarro barkin ah oo aan ku soo gaarin muddo 45 maalmood gudahood ah marka la dalbado waxay xaq u leeyihiin lacag celin ama dib u dirid bilaash ah.
Boorsooyinka Tote Bagyada
Qiyaasta Waqtiga Gaarsiinta: 10-14 Maalmood (DHL Oo La Socda Raadinta Goobaha)
Amarro kasta oo guntin maro ah oo aan soo gaarin muddo 45 maalmood gudahood ah marka la dalbado ayaa u qalma lacag celin ama dib-u-dirid bilaash ah.
US, UK, CA, AUS, Waqtiga Gaarsiinta AUS Qiyaasta: 10-25 Maalmood (EMS Iyadoo La Socodka Goobta)
US, UK, CA, AUS amarada sharaabaadka shaqaalaha ee aan ku soo gaarin 45 maalmood gudahood marka laga baaraandego dalabku waxay xaq u leeyihiin lacag celin ama dib-u-dirid bilaash ah.
Amarada sharaabaadka shaqaalaha caalamiga ah ee aan ku soo gaarin 60 maalmood gudahood marka la dalbado waxay xaq u leeyihiin lacag celin ama dib u dirid bilaash ah.
Boorsooyinka Tote-ka Baakadaha ah iyo Boorsooyinka Gacanta
Waqtiga Soo-Saarka: 4-6 Maalmood
Wixii amarro bac ah ee aan ku imaan 45 maalmood gudahood marka la dalbado waxay xaq u leeyihiin lacag celin ama dib u diris bilaash ah.
Waqtiga Soo-Saarka: 5-7 Maalmood
Qof kasta oo kabaha amarrada aan ku soo gaarin 45 maalmood gudahood marka la dalbado waxay xaq u leeyihiin lacag celin ama dib-u-dirid bilaash ah.
S: Goormaan heli doonaa macluumaadka raadraaca Amarkayga (yada)?
Lambarrada raadraaca waxaa lagu heli doonaa gudaha waqti cayiman oo hoos ku xusan waxaana si otomaatig ah loogu diri doonaa macaamiisha iyada oo loo soo diro emaylka ku qoran amarkooda.
Daboollada Masaajidka: 5 maalmood ka dib hawlgalinta amarka.
Dambiisha Dharka Dharka: 5-7 maalmood kadib marka la dalbado.
Shaashadda Shaashadda: 5-7 maalmood kadib marka la dalbado.
Dambiisha Harag Weelka Leather: 7-10 maalmood ka dib marka la dalbado.
Boorsooyinka Garbaha: 7-10 maalmood kadib marka la dalbado.
Dambiisha Koofiyadaha Shukulaatada: 7-10 maalmood kadib marka la dalbado.
Kabaha Cawrada: 7-10 maalmood kadib marka la dalbado.
Ku kale: 5-7 maalmood ka dib nidaamka hawlgalka.
S: Waa maxay sababta aan xogta raadintu ugu muujinayn lambarkayga raadraaca?
Amarada Mareykanka ee lambarrada raadraaca waxay qaadan karaan illaa 7 maalmood kadib amar la soo saaray oo la xiriira haynta xogta si loo muujiyo. Hubso inaad isticmaaleyso degelka saxda ah ee raadraaca kaasoo ah www.17track.net/en.
Wixii amarro caalami ah nambarada raadraaca waxay qaadan kartaa ilaa 10 maalmood kadib amar la soo saaray oo la raacayo macluumaadka raadraaca si loo muujiyo. Hubso inaad isticmaaleyso degelka saxda ah ee raadraaca kaasoo ah www.17track.net/en. Laguula taliyo, amarada caalamiga ah lama soo celin karo mar la raro mana tusi doonaan xogta geynta meesha la geynayo.
S: Waxaan jeclaan lahaa in la beddelo / la buriyo amar, Sidee ayaan ku sameeyaa arrintaas?
Waxaan ka shaqeynaa a ALL iibintu waa siyaasada ugu dambeeya. Tan macnaheedu waa inaadan tirtiri karin, soo noqon karin, ama heli karin lacag soocelinta amarka illaa ay khalad uun tahay dhammaadkayaga.
Waxaad ka aqrisan kartaa waxyaabo badan oo kusaabsan siyaasaddeena lacag celinta halkan.
S: Kuma faraxsani cabirka kabaha iyo taam. Maxaan sameeyaa?
Dhacdada dhifka ah ee ah in macaamilku uusan ku faraxsanayn ku habboonaantiisa kabaha, waxaan u hawlgelin doonnaa macaamiil macaamiil hal mar lacagla'aan ah.
Lacag celin looma soo saari doono cabirka muranka, kaliya isweydaarsiga ayaa la oggol yahay.
Isbedelada Bilaashka ah kaliya hal mar ayaa la oggol yahay hal amar kabood. Wixii kharash ah ee la xiriira isweydaarsiga ee ka dambeeya sarrifka ugu horreeya ee bilaashka ah waa inuu macmiilku daboola
Si loo beddelo is-weydaarsiga xorta ah, macaamiisha waa inay bixiyaan macluumaadka soo socda:
Sababta kabaha aysan ugu habboonaan (tusaale, aad u yar, aad u weyn, aad u cidhiidhi ah)
cabirka cusub ee uu dalbaday macmiilku
magaca macmiilka iyo lambarka dalabka
Lagaagama baahna inaad soo celiso kabaha asalka ah si aad u hesho is-weydaarsi lacag la’aan ah sida ku cad siyaasadan.
Si loo yareeyo halista cabirista arrimaha, waxaan ku bixinay shaxdo cabir ah bogaggooda qeexida badeecada kabaha shiraaca ah, kabaha suede.
Codsiyada isweydaarsiga cabbirka oo ka duwan in ka badan 2 cabbirka cabbirka asalka ah ee la dalbaday ayaa loo tixgelin doonaa qalad-galitaan macaamil ah mana u qalmi doono sarrifka
S: Waxay Sheegtay Cinwaankeyga Aan La helin
A: Waxaan rarnaa markab isticmaalaya Xafiiska Boostada ee Mareykanka. Haddii aad haysato sanduuqa PO oo aadan helin cinwaanka cinwaankaaga jirku, waa inaad isticmaashaa sanduuqa PO. Xaqiijinta ayaa sidoo kale noqon karta mid caqabad ku noqon karta soo gaabinta gaarka ah sidoo kale. USPS.com “raadi lambar koodh” ayaa kaa caawin kara inaad hesho soo gaabiyeyaashaaga gaarka ah iyo sida USPS u xaqiijin doonto cinwaankaaga.
S: Ma Fahmi Kartid Shaxdaada Sirtiga Shaxda.
J: Haddii aad fidiso shaati aad iska leedahay hadda oo raaxo leh oo aad ku cabirto salka gacmaha hoostooda, waa inaad awoodeysaa inaad wax aad ugu dhowdahay shaxdayada kuu shaqeyn doonta. Xusuusnow, cabirrada shaxanka waxaa iska leh shaatiga, ma ahan qofka loogu talagalay inuu xirto.
S: Sideen U Soo Noqdaa Ama U Beddeshaa Xadhigayga?
A: Fadlan Email noogu soo dir at taageero@thekdom.com oo noo soo sheeg waxa dhibku yahay! Waan kaala shaqeyn doonnaa inaan saxno arrinta. Fadlan xusuusnow, kuwani waa shaatiyo daabacan oo caado ah, oo loo sameeyay in lagu dalbado. Markii la daabaco, ma daabici karno ama ku celin karno kaydka. Marka, waxaan isku dayi doonnaa inaan wax ka qabanno si aan u hubinno inaad ku qanacsan tahay iibsigaaga!
Haddii soo-celinta la go'aamiyay in la dammaanad qaado, waxaan u hawlgelin doonnaa soo celinta qiimaha asalka ah ee shaatiga sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Lacag celintu waxay sida caadiga ah qaadataa 1 - 3 maalmood oo shaqo si ay u hawlgalaan mar alla markii aan soo saarnay. Haddii aad jeceshahay inaad sameyso is-weydaarsiga fadlan hubi inaad ku darto macluumaadka lacag bixinta ee dhoofinta soo celinta.
S: Ma Jiraan Faahfaahin Faahfaahin Naqshadeyda Xirashada.
A: Maaliyadaha qaar ayaa horay loo daaweeyaa kahor daabacaadan. Ha walwelin, waxay baabi'in doontaa marka ugu horeysa ee aad shaatiga maydho.
S: Waxaad Sameysay Khalad Amarkayga. Muxuu Yahay Xalka?
A: Aad ayaan uga xunahay. Had iyo goor ma dhacdo, laakiin qofna kama fiicna. Emayl taageero@thekdom.com waxaanan kaala shaqeyn doonaa inaan saxno. Badanaa, tan waxay si fudud u baahan doontaa inaad noo soo dirto sawir khalad ah oo aan sameynay si aan a) u xaqiijin karno sheegashadaada oo b) aan kuugu yeerno si aad u saxdid.
S: Waxaan dalbaday 2+ shay, laakiin mid keliya ayaan helay ... halkee amarkaygu jiraa?
Waxaan haynaa tiro badan oo alaabooyin ah oo aan ku keydsanayn guri. Marka, markii aad dalbatid waxyaabo badan markiiba, waxaa laga yaabaa in si gooni gooni ah loogu raro si ay dhakhso kuugu soo galaan. Waxaa suuragal ah inaad hesho hal shay ka hor kan xiga, marka fadlan ha murugoon haddii aadan walxahaaga hal mar wada qaadan, xusuusnow inay iyagu ku socdaan!
S: Sideen ku ogaadaa in Websaydhkani amaan yahay?
Waxaa na sugay Shopify, oo ah madal caan ku ah E-Commerce. Sidoo kale, waxaan damaanad qaadaynaa Hubinta AMMAANKA & AMNIGA. Lacagaha waxaa lagu shaqeeyaa iyada oo loo marayo Shopify iyada oo loo marayo shirkadaha kaararka waaweyn ee ka muuqda sawirka hoose. Ma hayno wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan ama kaarkaaga ah.